किन हुन्छ सपनामा सेक्स ? यस्ता छन् कारण !! | सुदुरपश्चिम खबर
किन हुन्छ सपनामा सेक्स ? यस्ता छन् कारण !!
पुरानो प्रेमी–प्रेमीकासँग सेक्स
यदि तपाईंको पूर्वप्रेमी वा प्रेमिकाको जन्मदिन आउन लागेको छ वा हालै तपाईंले उनीसँग बिताएका पलको फोटो हेर्नुभएको छ भने यस्तो सपना देख्न सकिन्छ । कहिलेकाहीँ जब तपाईं आफ्नो नयाँ साथीसँग नजिक बन्नुहुन्छ, त्यतिबेला भुपु मायालुको झझल्को आउँछ । तर, नयाँ साथीसँग प्रेममा पर्नुभयो भने पुरानो प्रेमी–प्रेमिकालाई बिस्तारै भुल्नुहुन्छ ।
धेरै युवा–युवतीहरुको सपनामा आफ्नो विपरितलिंगी बोससँग सेक्स गरिरहेका हुन्छन् । यसको मतलब तपाईं आफ्नो बोससँग साँच्चिकै शारीरिक सम्वन्ध राख्न चाहनुहुन्छ भन्ने होइन । फेरि यस्तो सपना देखियो भन्दैमा बोससँग दुरी बढाउनेतिर लाग्नु पनि हुँदैन । यस्तो सपना त्यतिबेला देखिन्छ, जब तपाईं बोसलाई आफ्नो प्रेरणास्रोत मान्नुहुन्छ ।
आफूलाई मन पर्ने सेलिब्रेटीसँग सेक्स गर्न नचाहने को होला ? यही चाहना जब तीव्र बन्छ, त्यतिबेला सपनामा देखिन्छ । यो कुनै खराब कुरा होइन । तर, यदि तपाईं कसैसँग रिलेसनसीपमा हुनुहुन्छ भने उसको तुलना आफूलाई मनपर्ने सेलिब्रिटीसँग नगर्नुस ।
यसले जटिल मानसिक अवस्थातर्फ संकेत गर्छ । धेरै कामहरु एकैपटक गर्नुपर्दाको तनावका बीच यस्तो सपना देख्न सकिन्छ । यदि सबै काम आफ्नो टाउकोमा नलिएर सबैलाई बाँड्नुभयो भने यस्तो सपना स्वत कम हुन्छ । अनलाइनखबर बाट सभार